Soomaaliland oo dacwad ka dhan ah Dowladda Soomaaliya u dirtay Beesha Caalamka - Awdinle Online
Soomaaliland oo dacwad ka dhan ah Dowladda Soomaaliya u dirtay Beesha Caalamka
Somaliland ayaa sheegtay in aanay wax Shaqo ah ku lahayn Nidaamka Doorashooyinka Soomaaliya, iyaga oo soo saaray ashtako ka dhan ah Dowladda Federaalka loo loo diray Beesha Caalamka.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliland oo la ogeeysiiyay QM, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Guud ahaan Beesha Caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliland aysan wax Shaqo ah ku laheyn nidaamka doorashooyinka Soomaaliland.
Soomaaliland oo aaminsa n inay ka Go’day soomaaliya inteeda kale ayaa War-saxaafadeedka kasoo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo lagu sheegay in 30 sano, kadib Somaliland ay tahay dal xor ah oo leh nidaam doorasho oo dimuqraadi ah.
Sidoo kale Soomaaliland waxaa ay sheegtay inay uga baaqeyso Shacabka ku nool degaannada Soomaaliland inay ka feejignaadaana cid kasta oo cadaw ku ah, isla markaana hal meel uga soo wada jeestaan.
Warkaan kasoo baxay Soomaaliland ayaa kusoo aadaya xilli Soomaaliya ay galeyso waqti doorasho, isla markaana xubno Baarlamanka labada Aqal ku matalaya Soomaaliland lagu dooranayo Magaalada Muqdisho.
Previous articleDarawal Mooto Bajaaj oo lagu dilay Magaalada Muqdisho
Next articleQarax sababay dhimasho & Dhaawac oo ka dhacay Duleedka Muqdisho